Apple mizara ny horonantsary voalohany amin'ny mozika Schmigadoon | Avy amin'ny mac aho
Apple mizara ny horonantsary voalohany an'ny Schmigadoon mozika
Ny 16 Jolay ho avy izao dia tonga ao amin'ny Apple TV + a andiana mozika vaovao ahitana fizarana 6 ary vita batemy amin'ny anarana tsy azo tononina Schmigadoon. Ity andiany vaovao ity dia parodies amin'ny sarimihetsika mozika taloha ary ny sasany amin'ireo lehibe amin'ny Broadway sy ny fahitalavitra.
Raha mijery ny tranofiara ianao, na dia tsy tianao mozika aza (tahaka ny tranga misy ahy), azo inoana fa manafay tsiky ianao (toy ny nanjo ahy), koa raha mpikirakira Apple TV + ianao, amin'ny 16 Jolay ho avy izao dia manana fotoana ianao amin'ity andiany vaovao ity izay hasehonay anao fandrosoana.
Parody iray amin'ireo mozika malaza, Schmigadoon! dia andian-tantara mahatsikaiky vaovao novokarin'i Lorne Michaels ary mpilalao an'i Cecily Strong sy mpandresy loka Emmy Award Keegan-Michael Key, mpivady nandritra ny dia lavitra natao hamelomana indray ny fifandraisan'izy ireo rehefa mahita tanàna majika ao Ilay mipetraka ny olona rehetra ao amin'ny Studio mozika tamin'ny taona 40.
Avy eo dia hitany fa tsy afaka miala izy ireo raha tsy mahita ny "tena fitiavana." Anisan'izany ny mpilalao veteranista Broadway sy fahitalavitra toa an'i Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Aaron Tveit, Dove Cameron, Ariana DeBose, Fred Armisen, Jaime Camil, Jane Krakowski, ary Ann Harada.
Manatevin-daharana ny programa a fitomboan'ny fanangonana atiny mandany ny karazana rehetra. Raha misy karazana izay mbola tsy misy amin'ny serivisy streaming Apple TV +, dia ho avy izy ireo raha toa ka misy ny talenta an'i Apple sy mampiseho ny fahaizany miasa.
Mandritra ny karazana rehetra, Apple dia maniry ny hanafoana ny fifaninanana loka rehetra mba hahazoany mari-pankasitrahana mamela izany mahazo fanajanana avy amin'ny vahoaka ho toy ny serivisy vidéo mandefa kalitao, mitovy amin'ny HBO ihany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple mizara ny horonantsary voalohany an'ny Schmigadoon mozika
Ny famatsiam-bola dia afaka tonga any amin'ny Apple Pay
LAGOS dia manome bracelet lafo vidy ho an'ny Apple Watch izay mitentina 6.500 XNUMX Euros